Nhare mbozha Kufunga
Muvhuro, June 4, 2012 Svondo, October 4, 2015 Adam Mudiki
Kuronga kukumbundira kubatanidzwa kwenhare munzira hombe? Pane zvakawanda zvinoonekwa nemakambani asingatarisiri kana kushanda kuti vawedzere marongero avo enhare. Ita shuwa yekuteerera kune anotevera matipi:
Musono Technology - Nepo tekinoroji yekubatana kwenhare ichigere kusvika zvizere, makambani anofanirwa gadzira zvivakwa zvavo zvakakomberedza gore-based chikuva iyo inounza pamwechete zvemukati, zvinyorwa, zvemagariro feeds, dhata yedhata, SaaS services, analytics uye zvakawanda.
Dana Kuita - Izvi zvinobata chokwadi kunyangwe echinyakare mafomu ekubata anotarisana nekuparadzira ruzivo kana kuzivisa, asi zvakanyanya pakubata nharembozha uko mantra yekubudirira iri kupa chiitiko chakanangana nebasa. Kuchinjisa yako yakajairika dhizaini njere kumusoro uye dhizaini yakakomberedza chiito mabhatani pane mafomu, kuisa mashandiro uye kupindura kwevatengi padanho rakaenzana neiyo interface uye brand.
Analytics - Kugadzira nharembozha kunogona kutora simba rakawanda zvekuti analytics inowanzo kuve yekufungidzira. Nekudaro, nekuomarara kwema mobile application uye kusanganisa analytics kuburikidza nesoftware yavo yekuvandudza kits (SDKs) KANA kubatanidza zvakajairika analytics mumasikirini ehupenyu uye mapeji ane simba ekutora zviitiko, iwe uchafanirwa kusiya nguva pakarenda rako rekuvandudza kuti zvinhu zvinyatso.
Social Media - Kubva pakukwanisa kunyorera kuburikidza nharembozha, kuendesa kuapp, kugovana munharaunda, zvemagariro chinhu chakakura mukushandisa nhare. Kubudirira kwekupedzisira kwemaitiro ekubata nhare kunoenderana nekugadzira masevhisi ebhizinesi kuyambusa hupenyu hwevatengi hwezuva nezuva kana basa.
Local - SOMOLO haingori indasitiri jargon, Yemagariro Nhare Yemunharaunda inotsanangura mashandiro anokurumidza kukura uye mapoka ekubatana muindastiri indasitiri. Kunyangwe kana chigadzirwa chako kana sevhisi isiri yemuno, neimwe nzira kusanganisa jogirafi mune yako nhare mbozha kunogona kutyaira zvimwe zviitiko.
Kutumira mameseji (SMS) achiri mupenyu uye akapora. Usatarisira pasi kusvika kwayo kana mhedzisiro inogona kuwanikwa kuburikidza nemamwe maratidziro akareruka.
enamel - Yahoo! inoti 20% yevashanyi vese vava kushanyira pane mbozhanhare ... uye isu tinoziva izvozvo nharembozha email yakavhura mitengo vava pedyo nekaviri izvozvo. Kana usiri kugadzira yako email kune diki skrini, padiki padiki vanhu havasi kuverenga… uye zvakatonyanya… vanogona kunge vasingazvinyore.
Mobile Apps - usakanganwe mashandisiro anoita mamwe mafoni maficha, akaita seFacebook, Youtube, Mapikicha mapikicha, Kugovana kweMimhanzi, Geolocation, nezvimwewo. Kubatanidza zvikumbiro zvechitatu muchikumbiro chako kunogona kukuwanira mamwe mareti ekugamuchirwa kana akaitwa mushe!
Diki Screens dziri kukura ... uye dziri kuratidza resolution dzakakwirira. Kugadzira zvinoteerera zvinoshandiswa zvinotora mukana wehukuru hwechiso uye resolution ichawedzera mashandisiro uye kuita.
chibatiso - maHacker anogara achifamba achirwisa nhare dzakangwara, uye mushambadzi achishandisa kushushikana muchirongwa chekambani yako kubaya malware kune smart phone ndicho chinhu chekupedzisira chaunoda.
Idzi nzira dzinogona kuda nyowani Chief Kufambisa Officer uyo anosanganisira mune epakati bhizinesi mashandiro uye anoramba achikwanisa kudzora nzira dzekubata nhare kwete "Chief Technology Officer" anotungamira bazi rehunyanzvi dhipatimendi.
Tags: mobile analyticsnhare yekugadziramobile marketingnharembozhanhare mbozha
Jun 7, 2012 pa11: 12AM
Zvakadii neinonyanya kukosha pane zvese: zvemukati?!
Izvi zvaive kufunga izvo vanhu kazhinji vasingateerere, Michael. Ini handimbofa ndakapokana kuti zvemukati zviri # 1.
Jun 8, 2012 pa4: 23AM
Kutenda nemhinduro yako Douglas. Mafungire ehurongwa aunotaura akakosha. Asi mune yangu ruzivo vanhu havabhadhara zvakanyanya kutarisisa zvemukati zvimwe: - / Ivo vanowanzo tarisa zvakanyanya pahunyanzvi, maturusi, chiteshi, nezvimwewo Zvirimo zvakakosha. Asi chikuru zvemukati ndizvo zvese. Kutenda & zvakanakisa, Michiel